Vaovao - milina fanapahana laser laser Suntop mandeha ho azy 3000W napetraka ao Frantsa am-pahombiazana
Ny masinina fanapahana laser laser Suntop mandeha ho azy 3000W dia apetraka ao Frantsa am-pahombiazana
Avy amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana hatramin'ny famolavolana, aorian'ny ezaka 40 andro ataon'ny mpiasan'ny SUNTOP rehetra, dia namboarina manokana tany Frantsa ny famahanana mandeha ho azy sy ny famoahana ny milina fanodinana laser avy amin'ny fibre.
Haingam-pandeha ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana sy ny fandefasana azy, izay in-2 amin'ny famoahana sy famoahana karazana cantilever TRUMPF any Alemà amin'ny atrikasa iray ihany. Ny mpanjifa dia tena afa-po amin'ny haitao an'ny SUNTOP.
Vao tsy ela akory izay ny SUNTOP dia nahomby tamin'ny famolavolana rafitra famahanana sy famoahana mandeha ho azy feno fahana 2500KG izay mety amin'ny famatrarana sy famoahana metaly matevina sy lehibe, hamonjy be ny vidin'ny mpiasa izy io, hahatonga ny atrikasa ho tena tsy misy mpiambina ary hametraka fototra tsara ho an'ny indostria 4.0.
Raha ny fahitan'ny mpilalao tsena dia nitombo be ny fanafarana sy ny fanondranana orinasa tsy miankina, ary nalaza kokoa ny anjara asan'ny "stabilizer" amin'ny varotra ivelany. Ny data dia mampiseho fa tao anatin'ny 10 volana voalohany, ny importa sy ny fanondranana orinasa tsy miankina dia nahatratra 12 trillion yuan, fiakarana 10,5%, mitentina 46,2% ny sanda ara-barotra any Shina, fitomboana 3,9 isan-jato isaky ny fe-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa . Anisan'izany ny fanondranana dia 7,94 trillion yuan, fiakarana 10,9%, mitentina 55,4% amin'ny sanda fanondranana rehetra; ny import dia 4,06 trillion yuan, fiakarana 9,7%, mitaky 35% ny sandan'ny import rehetra.
Manantena ny ho avy dia antenaina amin'ny ankapobeny fa ny varotra ivelany amin'ny taona iray dia hitazona fironana milamina sy miabo hatrany. Tang Jianwei, lehiben'ny mpikaroka ny ivon'ny fikarohana ara-bola an'ny Bank of komunikasi, dia nilaza fa nitombo ny sandan'ny importa sy ny vidin'ny vy, ny soja ary ny entam-barotra hafa, izay manondro fa mbola tsy marefo ny fangatahana ao an-trano. Ny index index of PMI tamin'ny volana oktobra dia 50,8%, 0,4 isan-jato isa ambony noho ny tamin'ny volana teo aloha, ary teo ambonin'ny tsipika boom sy bust no roa volana nifanesy. Miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanjifàna ao an-trano sy ny famokarana, antenaina hitombo ny firoboroboan'ny fanafarana manaraka.
Masinina fanapahana fantsom-laser, Pipe Fiber Laser Cutter, Masinina manapaka fantsom-laser, Masinina fanapahana laser fibre China, Tube Laser Cutter, Masinina manapaka laser,